सैन्य विमानको टायरमा बसेर भाग्न खोजेका उनीहरु उड्दै गरेको विमानबाट ख सेका मध्य एक राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी ! – My Blog
सैन्य विमानको टायरमा बसेर भाग्न खोजेका उनीहरु उड्दै गरेको विमानबाट ख सेका मध्य एक राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी !
No Comments on सैन्य विमानको टायरमा बसेर भाग्न खोजेका उनीहरु उड्दै गरेको विमानबाट ख सेका मध्य एक राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी !
यही सोमबार अफगानिस्तानबाट सैन्य बिमानको चक्कमा लुकेर यात्रा गर्ने क्रममा आकाशबाट झ’रेका तीन जनामध्ये एकजनाको फुटबल खेलाडी भएको बताइएको छ । तालिबानी लडाकुको त्रासका कारण सैन्य विमानको चक्कामा लुकेर यात्रा गर्न खोजेका अफगानिस्तानको राष्ट्रिय युवा फुटबल टिमका खेलाडी जाकी अनवारीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
सोमबारमात्र तीन जना अफगानी नागरिक उडिरहेको विमानबाट ख’से’का थिए । सैन्य विमानको टायरमा बसेर भाग्न खोजेका उनीहरू काबुल सहरको माथि उड्दै गरेको विमानबाट खसेका थिए । केही व्यक्तिको शव स्थानीयको घरको छ’तमा ख’सेका थिए । विमानबाट खस्नेमध्येमा फुटबलर अनवारीसमेत रहेको अफगानिस्तान फुटबल महासङ्घले जनाएको छ ।
हामिद कर्जायी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार भेला भएका हजारौँ जनताबीच अनवारीसमेत थिए । उनी पनि तालिबानी लडाकुबाट जोगिन सुरक्षित देश जाने प्रयासमा थिए । सेनाको सी–१७ विमानबाट सुरक्षित स्थानको खोजीमा निस्किने प्रयासमा रहेका उनको आकाशमा उडिरहेको विमानबाट ख’ सेर निधन भएको हो ।
तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जामा जमाएपछि हजारौँ सङ्ख्यामा अफगान नागरिकहरू देश छा’डेर भागिरहेका छन् । पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न थालेपछि अफगान नागरिकहरू पनि काबुलस्थित विमानस्थलमा पुगेका थिए । सोमबार अमेरिकी एयरफोर्सको विमानको छेउमा रनवेमा सयौँ मानिसहरू कुद्दै गरेको र केही विमानको चक्कामाथि झु’न्डि’एर ब’सिरहेको भिडियो बाहिर आएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिएको एक भिडिओमा मानिसहरु विमानमा चढ्नको लागि तँ’छाड’मछाड गरिरहेको देखिन्छ । तालिबानको तथ्याङ्कअनुसार काबुल विमानस्थल र त्यसको वरिपरि गत आइतबारदेखि बुधबारसम्ममा १२ जनाको मृत्यु भएको हो । भिडियो
← पहिरोमा पुरिएकी बालिकाको शव भेटियो , शोकमै डुब्यो गाउँ ! → ‘नेपालकी छोरी हुँ म’ भन्दै सबैलाई नचाउने इण्डियन आइडलका प्रतियोगी पवनदीपकी बहिनी ज्योति (भिडियो)